Wilaayada islaamiga G/gaduud oo sheegtay in ay dhawaan maamulo usamaynayso degmooyinka gobalka. | Halganka Online
Wilaayada islaamiga G/gaduud oo sheegtay in ay dhawaan maamulo usamaynayso degmooyinka gobalka.
Posted on Maajo 8, 2010 by halganka
Wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa shaacisay in meel wanaagsan ay u marayaan dadaallo ay maamulo Islaami ah ugu samaynayso deegaanada dhaca Bariga Galguduud oo ay wilaayadu dhawaan dagaal kula wareegtay.
Waaliga Wilaayada Galgduud Sheekh Yuusuf Ciise Kaba-Kudukade oo maanta lahadlay saxaafadda ayaa xaqiijiyay in Wilaayadu ay si KMG ah maamulo ugu dhistay tuulooyin hoos yimaad Ceeldheer,Galcad iyo Masagawaa.
Sheykh Yuusuf ayaa intaasi ku daray in hadda ay meel wanaagsan umarayaan qorshayaal ay maamul ugu samaynayaan dhamaan degmooyinka Wilaayada Islaamiga ah ee galguduud.
deegaamada Maamulada loo sameeyay waxaa kamid ah deegaanka Ceelhareeri iyo tuulooyin kale oo katirsan degmooyinka dhaca Bariga Wilaayada Galguduud.
ciidamada Mujaahidiinta Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa bartamihii Bishii April ee sanadka dagaalllo Jihaad ah kula wareegay Bariga Galguduud oo ay qas ka wadeen Maleeshiyaad Qabuuriyiin ah iyo kuwa Riddada taabacsan
« Nadwo Ciwaankeedu ahaa “Jamaacada Ictisaam oo u dhexaysa u adeegidda Cadawga iyo Khiyaamaynta Mujaahidiinta” oo lagu qabtay Masjidka Abaa Hureyra magaalada Muqdisho. Ciimada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaal kula wareegay degmada Ceelbarde Gobalka Bakool iyo Maleeshiyaadkii Riddada oo Hub farabadan ka cararay »